Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska oo dacwad ku soo oogay macallinka Man United ee Jose Mourinho – Gool FM
(England) 27 Okt 2016 – Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa dacwad ku soo oogay macallinka Manchester United ee Jose Mourinho, kaasoo ku aaddan hadalkii uu ka sheegay garsoore Anthony Taylor ka hor kulankii Manchester United ay la ciyaartay Liverpool 17-kii bishan October.
Sanadkii 2009-kii ayaa la soo saaray sharci tababarayaasha, ciyaartoyda iyo saraakiisha kooxaha u diidaya in wax laga sheego garsoorka, sharcigan FA-ga ayaana u ogolaanayn in garsoorka wax laga sheego ka hor kulamada ama kaddib.
Anthony Taylor oo ku dhashay Manchester ayaa kulankii Liverpool iyo Man United markii loo magacaabay taageerayaasha kooxda ka dhisan garoonka Anfield ay ka soo horjeesteen cabashana ka muujiyeen garsoorahan.
Ka hor kulankii Liverpool Mourinho oo ka hadlayey Anthony Taylor ayaa yiri: “Anigu waxaan filayaa in Mr Taylor uu yahay garsoore aad u fiican, laakiin waxaan malaynayaa qof ujeedo lihi inuu isaga culayskan saaray kaas oo aan dareensanahay in ay wax adag ku noqon doonto isaga in uu sameeyo bandhig aad u fiican.”
“Anigu waxaan leeyahay aragtidayda, laakiin waan fahansanahay isla markaana waxaan cashar ka bartay in marar badan la igu ciqaabay erayo aan sheegay awgeed, sidaa daraadeed ma doonayo in aan wax badan arrintan ka sheego”.
Maareeyaha kooxda Manchester United ayaa haysta ilaa 31 bishan October 8:00 habeenimo saacadda geeska Afrika maalinta Isniinta inuu jawaab ka bixiyo dacwadaan lagu soo oogay.
Sahanka Manchester United oo ku hawlan qiimeynta Dembele